Senator ka tirsan Aqalka Sare oo dowladda Soomaaliya ku amaanay Gurmadii ay u fidisay dadka ay saameysay duufaantii ku dhufatay Gobolada Waqooyi. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Jun 6, 2018
Hornafrik-Senator Nuuro Faarax Jaamac oo ka tirsan Xubnaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kana soo jeedo Gobolka Sanaag xilligaane ku sugan wadanka Zambia ayaa ka hadashay lacag dhan Hal milyan oo dollar taas oo dhawaan dowladda Soomaaliya ay ugu deeqday dadka Shacabka ah ee duufanta sagar ay ku saameysay Gobolada Waqooyi ee dalka.
Dowladda federaalka Soomaaliya ee anigu aan ka tirsanahay waxaan ku Amaanaya tilaabada ay qaaday ee ah in ay gurmad u sameysay shacabkii dhibaatadu gaartay, waane wax looga baahnaa dowladda durbana ay ku dhaqaaqday ayay tiri, Maamo Nuuro Faarax oo ka tirsan Golaha Aqalka Sare ee dalka.
Sidoo kale Maamo Nuuro Faarax Jaamac waxaa ay sheegtay in arrintaani ay horseedi karto isu soo dhawaanshaha dowladda federaalka Iyo Shacabka Soomaaliland oo ay midoobi karaan.
Waxaana sidoo kale ay xustay in dowladda hada jirto ay dariiq cusub furtay.
ugu dambeyn Senator Nuuro waxaa ay soo dhaweysay dariiq kasta oo loo marayo mideynta Soomaaliya Iyo Soomaaliland
Hadalka Senator Nuuro Faarax Jaamac ayaa yimid ka dib markii Guddiga Gurmadka ee uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaare ku Xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu Lacag hal Milyan ah ugu deeqay dadkii Gobolada Waqooyi ay ku saameysay Duufaanta Sagar taa dad Iyo duunyo intabSoomaaliland.
Kooxo hubeysan oo Nabadoon caan ah ku dilay degmada howlwadaag.